Iwu kuki • Musatalent
Agbasa ozi gbasara kuki
Dabere na edemede 13 nke Iwu Iwu Iwu no. 196/2003 (Koodu banyere nchedo nke data nkeonwe) na onyinye nke nkwa maka nchedo data nkeonwe "Nchọpụta nke usoro dị mfe maka ozi ahụ yana nnabata nke iji kuki - Mee 8, 2014" Carmelo Vecchio's Musatalent Academy Company (ụlọ ọrụ ahụ) na-enye ozi ndị a gbasara ojiji nke kuki na weebụsaịtị ya www.musatalent.it
Kedu ihe bụ kuki
Kuki bụ obere ederede ederede nke ezigara na ihe nchọgharị ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, echekwara na kọmputa, smartphone ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ eji abanye na Internetntanetị, oge ọ bụla a gara na ebe nrụọrụ weebụ. Anyị na-eji kuki maka ebumnuche dị iche iche, iji nye ahụmịhe dijitalụ ọsọ ọsọ ma dịkwa nchebe, dịka ọmụmaatụ, na-enye gị ohere ịchekwa njikọ nke ebe echekwabara na-arụ ọrụ mgbe ị na-agagharị na ibe saịtị ahụ; echekwa nzere; chọpụta peeji nke saịtị ahụ gara aga, iji gbochie ha ịmeghachi ya.
A gaghị eji kuki echekwara na kọmputa ahụ iji weghachite data ọ bụla site na diski ike, nyefee nje virus kọmputa ma ọ bụ chọpụta ma jiri adreesị ozi-e nke onye nwe ya. Kuki ọ bụla dị iche na ihe nchọgharị na ngwaọrụ ejiri nweta saịtị nke Companylọ Ọrụ.
Kuki ndị ụlọ ọrụ na-eji na nzube ha
Kuki Ntugharị: Kuki ndị a dị mkpa iji chọgharịa na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ; ha na-ekwe ka ọrụ dịka nyocha, nkwado, njikwa nke oge nchọgharị na mgbochi aghụghọ. Ndị a bụ kuki ndị na-enye gị ohere ịchọpụta na ohere ịbanye na ebe echekwara emeela mgbe niile ma na-enye gị ohere ịnyagharịa na peeji nke saịtị ahụ.
Achọghị nkwenye gị tupu ojiji nke kuki ndị a.
Ọrụ kuki: Kuki ndị a na-enye ọrụ ndị ọzọ ma na-enye anyị ohere ịdebe nhọrọ nke ndị ọbịa, dị ka nhọrọ asụsụ. Ndị a bụ kuki na-enye gị ohere icheta mmasị na nzere eji
Kuki nyocha: Kuki ndị ọzọ a na-enye gị ohere ịnakọta ozi gbasara ndị ọrụ site na saịtị. Ndị a bụ kuki na-enye ohere ịchọpụta ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na saịtị ahụ, ibe ndị eleta, oge ejiri na saịtị ahụ, wdg ...).
Achọrọ nkwenye gị tupu ojiji nke kuki ndị a.
Kuki na-elekọta mmadụ:
Kuki ndị ọzọ a na-enye ndị ọrụ ohere ịmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta (Facebook, Twitter). Ndị a bụ kuki na-enye gị ohere ịkekọrịta ọdịnaya saịtị site na netwọk mmekọrịta
A na-eji kuki ndị ọzọ ahọpụtara nke ọma ma na-achịkwa iji hụ na ozi ahịa ndị enwetara site na weebụsaịtị ndị ọzọ thelọ ọrụ na-eji agbasa ozi mgbasa ozi ya ka a ga-esi kwekọọ na mmasị ndị ọbịa. Ndị a bụ kuki mgbe ejiri ha na ozi ndị ọzọ metụtara gị, dịka otu esi eji ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ anyị, nye gị ohere ịmara mgbe ị banyere ebe edebere yana ịnye ozi azụmaahịa ahaziri iche dịka mmasị ndị ọbịa.
Edere kuki eji arụ ọrụ na saịtị ahụ na tebụl ndị a:
Nke mbụ Party Kuki
kuki Nome oge Ikpeazụ Otutu mmadu kwenyere
Musatalent WC_ACTIVEPOINTER Oge Kuki teknụzụ nke nwere uru nke NJ oge na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị OBU
Musatalent WC_GENERIC_ACTIVITYDATA Oge Kuki teknụzụ nke dị naanị maka nnọkọ na onye ọrụ njirimara OBU
Musatalent WC_USERACTIVITY_ * Oge Kuki teknụzụ nke na-enye ohere ịnyefe data n'etiti ihe nchọgharị na ihe nkesa na ihe gbasara SSL ma ọ bụ njikọ SSL. OBU
Musatalent WC_SESSION_ESTABLISHED Oge Kuki teknụzụ mepụtara mgbe onye ọrụ nweta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị OBU
Musatalent WC_PERSISTENT Oge Kuki teknụzụ na-echekwa ọrụ na ọrụ ahịa metụtara ịhazi njirimara nke ID OBU
Musatalent WC_MOBILEDEVICEID Oge Kuki teknụzụ nke na-achọpụta ngwaọrụ onye ọrụ jiri OBU
Musatalent WC_AUTHENTICATION_ * Oge Kuki teknụzụ na-enye ohere nyocha echedoro OBU
Musatalent WC_Timeoffset Oge Kuki teknụzụ
Ejiri maka ịgbakọ oge nke timestamps
A na-ejikọ kuki "ndị ọzọ" na ọrụ ndị ọzọ nyere: a na-eji ha maka ebumnuche dị iche iche dịka nyocha ọganihu nke mkpọsa ahịa na / ma ọ bụ iji nyefee mgbasa ozi ahaziri na weebụsaịtị na ndị mmekọ anyị. A na-akpọ ọrụ a retargeting ma dabere na mmemme igodo, dị ka ebe a na-achọgharị, akụkụ ndị elere anya na ndị ọzọ.
Nke a bụ ndepụta nke kuki ahụ e kwuru n'elu:
Aha kuki Ngalaba Atiya Ikpeazụ Njikọ saịtị nke atọ maka Deactivation kuki
__utma, _utmb, _utmc, _utmli, __utmep, _utmept, _utmv, _utmz www.google.com Na-adịgide adịgide Nchịkọta, Ntughari ego https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
_dc_gtm_UA_42147344-1 www.google.com Na-adịgide adịgide Nchịkọta, Ntughari ego https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Ihe nkwụnye mmekọrịta
A na-ahụ “bọtịnụ mmekọrịta” ndị a na weebụsaịtị anyị iji nye gị ohere ịkekọrịta ọdịnaya site na netwọkụ mmekọrịta, gụnyere Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube na Google Plus. A na-etinye kuki site na nyiwe ndị a na saịtị anyị, iji nye ha ohere ịnakọta ozi gbasara gị na-eme nchọgharị.
Mụtakwuo maka Kuki nke atọ
• Iwu nzuzo Google dị na njikọ ndị a:
• Iwu nzuzo Linkedin dị na njikọ ndị a:
• Iwu nzuzo Facebook dị na njikọ ndị a:
• Iwu nzuzo Twitter dị na njikọ ndị a:
Njikwa nke mmasị Kuki gị
N'oge ịnweta saịtị ọ bụla nke saịtị ahụ, enwere ọkọlọtọ nke nwere ozi dị mfe.
Site n'ịnọgide na-agagharị, site na ịnweta mpaghara ọzọ nke saịtị ahụ ma ọ bụ na-ahọpụta otu mmewere nke otu (dịka ọmụmaatụ, onyonyo ma ọ bụ njikọ), enyerela nkwenye nke kuki.
Enwere ike gbanwee ma jikwaa nhọrọ kuki gị site na ntọala ihe nchọgharị gị:
1. site na mwube ihe nchọgharị gị
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ igbochi ma ọ bụ hichapụ kuki ndị ahụ sitere na saịtị nke orlọ ọrụ ma ọ bụ saịtị ọ bụla, ịnwere ike ịme ya site na ịgbanwe ntọala ihe nchọgharị ahụ site na ọrụ kwesịrị ekwesị.
N'okpuru ebe a bụ njikọ nke ntuziaka nke ihe nchọgharị ndị a:
Anyị na-echetara gị na iwepu kuki niile, gụnyere ịnyagharịa na kuki arụmọrụ, nwere ike ịkpata nsogbu ịnyagharị na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịga na peeji ọha nke saịtị ahụ, mana ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume ịnweta mpaghara echekwara ma ọ bụ zụta ihe.
Ojiji nke weebụsaịtị ndi ozo
A na-atụ aro ka ị gụọ ozi nzuzo na kuki nke weebụsaịtị ndị a na-enweta site na njikọ na weebụsaịtị websitelọ Ọrụ.
N'oge ọ bụla ị nwere ike ịrịọ ozi na nhazi nke data nkeonwe gị, nweta mmelite, ndozi ma ọ bụ mwekota nke otu, yana inweta nkagbu, mgbanwe n'ụdị na-enweghị aha ma ọ bụ igbochi data ejiri mebie iwu na imegide Nhazi nke Gi dika ndokwa nke Nkeji edemede 7 nke Iwu Iwu 196/2003 kwupụtara na njedebe na ozi a.
Iji gosi ikike gị, ị nwere ike ịkpọtụrụ Data njikwa site na izipu ederede ederede na adreesị dị n'okpuru ma ọ bụ ozi-e [email protected]
Onye nwe ya na njikwa nke nhazi data
Onye na-ahụ maka data bụ Ditta Musatalent Academy nke Carmelo Vecchio, na ụlọ ọrụ e debara aha na Alessandro Valignani 23 - 65126 Pescara (Pe)
Onye na-ahụ maka ọgwụgwọ a bụ Maazị Carmelo Vecchio.
Nwelite ikpeazụ: 23 June 2015
Art. 7 Iwu Iwu 196/2003. Ikike e nyere ndị nwere mmasị.
1. Onye ọ bụla nwere mmasị nwere ikike ịnweta nkwenye nke ịdị adị ma ọ bụ na ọ bụghị nke data nkeonwe gbasara ya, ọbụlagodi na edebeghị ya, yana nkwukọrịta ha n'ụdị nwere nghọta.
2. Onye nwere mmasi nwere ikike inweta ihe ngosi a:
1. nke mmalite nke data onwe onye;
2. ebumnuche na usoro nke nhazi;
3. nke mgbagha etinyere ma ọ bụrụ na ọ bụ ọgwụgwọ emere site na enyemaka nke ngwa elektrọnik;
4. nke njirimara njirimara nke onye nwe ya, nke ndị ọrụ ya na onye nnọchi anya ahọpụtara dabere na edemede 5, paragraf 2;
5. nke isiokwu ma ọ bụ edemede nke isiokwu ndị enwere ike ịgwa ma ọ bụ ndị nwere ike ịmụ banyere ha dị ka onye nnọchi anya ahọpụtara na mpaghara nke Ọchịchị, ndị njikwa ma ọ bụ ndị nnọchi anya.
3. Onye nwere mmasi nwere ikike inweta:
1. mmelite, ndozi ma ọ bụ, mgbe ọ nwere mmasị, ijikọ data;
2. nhichapụ, mgbanwe gaa n'ụdị na-enweghị aha ma ọ bụ igbochi data esichara mebiri iwu, gụnyere data nke na-ekwesịghị idowe maka ebumnuche nke anakọtara ma ọ bụ hazie data ahụ
3. Akaebe na arụ ọrụ ndị a rụtụrụ aka na leta a) na b) emeela ka uche pụta ìhè, yana n'ihe metụtara ọdịnaya ha, nke ndị agwala ma ọ bụ kesaa data ahụ, belụsọ n'ihe metụtara mmezu a. egosiputa na odighi ekwe omume ma obu tinye aka n’uzo ndi n’etufughi ikike ya.
4. Onye nwere mmasị nwere ikike ịjụ, n'ozuzu ya ma ọ bụ n'akụkụ ya:
1. maka ihe ziri ezi, na nhazi nke data onwe onye gbasara ya, ọbụlagodi na ọ dị mkpa maka mkpokọta;
2. na nhazi nke data onwe onye gbasara ya maka ebumnuche nke izipu mgbasa ozi ma ọ bụ ihe ahịa ahịa ma ọ bụ maka ịme ahịa ahịa ma ọ bụ nkwukọrịta azụmahịa.
Nka na ụzụ kuki: Ha anaghị achọ nkwenye sitere n'aka onye ọrụ maka ojiji ha.
Kuki nyocha: Ha choro nnabata tupu onye oru maka ojiji ha.
Kuki na-elekọta mmadụ na profaịlụ: Ha choro nnabata tupu onye oru maka ojiji ha.